Izindaba - Iphakethe Lesikhwama Esinama-Jumbo Lesikhwama Sezinsimbi
Iphakethe Lesikhwama Esibanzi Iphakethe Lesikhwama Sezinsimbi
Ama-iron ores amatshe namaminerali lapho insimbi yensimbi ingakhishwa khona kwezomnotho. Ama-ores ngokuvamile acebile ngama-oxide ensimbi futhi ayahluka ngombala kusuka kokumpunga okumnyama, ophuzi ngokugqamile, noma onsomi ojulile ngokubomvu okubomvu. Insimbi ivame ukutholakala ngesimo se-magnetite (Fe3O4, 72.4% Fe), hematite (Fe2O3, 69.9% Fe), goethite (FeO (OH), 62.9% Fe), limonite (FeO (OH)·n (H2O), 55% Fe) noma i-siderite (FeCO3, 48.2% Fe).
Ama-ores aqukethe inani eliphakeme kakhulu le-hematite noma i-magnetite (enkulu kunama-60% yensimbi) aziwa njenge- "ore yemvelo" noma "ore shipping direct", okusho ukuthi angaphakelwa ngqo ezithandweni zokwenza insimbi. I-iron ore yinto eluhlaza esetshenziselwa ukwenza insimbi yengulube, okungenye yezinto zokusetshenziswa eziyinhloko zokwenza insimbi—I-98% yensimbi yensimbi esetshenzisiwe isetshenziselwa ukwenza insimbi.
Iphakethe le-FIBC Bag lezinsimbi.
Isiyingi - Lesi sitayela sesikhwama senziwa ku-loom njengebhubhu futhi siyizinga eliphansi kakhulu le-FIBC. Ngeke igcine ukwakheka kwayo lapho ilayishiwe futhi izohlala phansi ivuleke phakathi. Izofana notamatisi lapho ulayishwa, njengoba umkhiqizo uzokwelula indwangu lapho ingaphansi kwengcindezi yomkhiqizo olayishwayo.
I-U-Panel - Isikhwama se-U-panel siyisinyathelo esivela esikhwameni esiyindilinga, ngoba sizoba nezingcezu ezimbili zendwangu efana nesimo se-U ethungwe ndawonye ukwenza ukwakheka kwesikhwama. Izogcina ukubukeka kwayo okuyisikwele kangcono kakhulu kunesitayela esiyindilinga.
IPhaneli Eline - Isikhwama samaphaneli amane yisona sikhwama esihle kakhulu sokuhlala isikwele ngaphandle kwesikhwama esididayo. Yenziwe ngezingcezu ezine zendwangu ezakha izinhlangothi kanti enye ingezansi. Lezi zonke zithungelwe ndawonye eziphikisana nokuthambekela kokwelula kwesikhwama futhi zisiphethe ngendlela eyi-cube kangcono kakhulu.
Baffle - Lesi sitayela sizohamba phambili ekugcineni ukuma kocube komkhiqizo wakho lapho isikhwama silayishiwe. Inezindwangu ezengeziwe ezithungwe phansi ekhoneni ngalinye ukuze zisebenze njengephakethe lokugcwalisa ikhona ngalinye. Ngaphezu kwalokho, kunamanye amaphakethe athungwe ohlangothini ngalunye ukuze wonke umkhiqizo uqoqane uzungeze ama-baffles namapokhethi. Lokhu kuphelele uma unomkhiqizo omncane wobubanzi njengobhontshisi ongagudla phakathi kwezingqimba ngaphandle kokulengiswa. Lezi zikhwama ngobuningi zizoba lula ukustaka njengoba zizokwenza i-cube enhle yesikwele.